[DRIVE Test] 2019 Mercedes-Benz A200 - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > Review > Test Drives > [DRIVE Test] 2019 Mercedes-Benz A200
DRIVE Test the 2019 Mercedes-Benz A200 in Yangon.
Zawgyi Version ….
နာမည်ကျော် Mercedes Benz ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ထုတ် A- Class ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ A 200 ကို Test Drive လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားပါကင် အလိုအလျောက် ထိုးပေးတဲ့ စနစ်လို အဆင့်မြင့် ယာဉ်မောင်းအထောက်အကူပြု နည်းပညာတွေကြောင့် ကြွေလောက်စရာ ကားတစ်စီးဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘယ်လိုဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်သစ်တွေ၊ ဘယ်လိုနည်းပညာသစ်တွေကို ထည့်သွင်းထားမလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Unicode Version …
နာမည်ကေ်ာ် Mercedes Benz ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ထုတ် A- Class ကားတစ္စီျးဖစ္တဲ့ A 200 ကို Test Drive လုပ္ထားတာပျဲဖစ္ပါတယ်။ ကားပါကင် အလိုအေလ်ာက် ထိုးပေးတဲ့ စနစ္လို အဆင့်ျမင့် ယာဉ်မောင်းအေထာက်အကျူပု နည်းပညာတြေကြာင့်ေကြေလာက္စရာ ကားတစ္စီျးဖစ္မယ္လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘယ္လိုဒီဇိုင်းအျပင်အဆင်သစ်တြေ၊ ဘယ္လိုနည်းပညာသစ်တြေကို ထည့်သြင်းထားမလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရေအာင်။
Thanks to Mercedes-Benz Myanmar for arranging the car.
Tags a200mercedesTest Drive
2019 Mercedes-Benz A200"]
Pininfarina မှ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည် Battista Pure vision အား မိတ်ဆက်